Kudhinda - Shanghai Comi Aroma Co, Ltd.
Chekupedzisira, chidimbu chekupedzisira chepuzzle icho chiri chako chakasarudzika chitarisiko ndechekuti chiratidzo chako uye neruzivo rwechigadzirwa zvinodhindwa sei pane yako yekuisa. Pano, tinopa huwandu hwakazara hwesarudzo, kusanganisira silika kuongororwa, kudhindisa offset, HTL / Heat Transfer Label, kupisa kutsika, laser etching. Isu tinopawo masevhisi ekugadzirisa akadhindwa mabhokisi ako ekupakata zvido.
Kana iwe uchinzwa kukurirwa nesarudzo, nyanzvi dzedu dzinogona kubatsira kukutungamira. Taura nesu
Silk kuongorora ndiko kuita uko inki yakadzvanywa kuburikidza nechipikicha chakarapwa skrini pamusoro. Rimwe vara rinoiswa panguva, riine sikirini imwe chete neruvara. Huwandu hwemavara hunodiwa kuti uone kuti mangani mapashure anodikanwa esirik screen kudhinda. Iwe unogona kunzwa iko kugadzirwa kwemapikicha akadhindwa pane yakashongedzwa pamusoro.
Kudhindisa kweOsetset kunoshandisa mahwendefa ekudhinda kuendesa inki mumidziyo. Unyanzvi uhu hwakajeka kupfuura kudhinda kwesiriki uye unoshanda kune akawanda mavara (anosvika 8 mavara) uye halftone mifananidzo. Maitiro aya anowanikwa kune machubhu chete. Iwe haunzwe manyorerwo ezvinyorwa zvakadhindwa asi paine imwe inopfuura-kurovera ruvara mutsara pane chubhu.